तपाईलाई थाहा छ घडीको अलार्म हरेक ९ मिनेटमा किन दोहोरिन्छ ? यस्तो छ रोचक कारण | Rajmarga
हरेक बिहान जब अलार्म बज्छ तब तपाई त्यसलाई बन्द गरिदिनु हुन्छ, सोच्नु हुन्छ कि बस ‘बस दश मिनेट अरु सुतौ ।’ शायद तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ त्यो दश मिनेट होइन बरु नौ मिनेट हुन्छ ।
तर नौ नै किन ? यसको जवाफ जान्नका लागि हामी विगत समयमा फर्कनुपर्ने हुन्छ, जब स्नुज बटनको आविस्कार गरिएको थियो। स्नुज बटनको सहयोगमा हामी अलार्मलाई केही समयका लागि अगाडि बढाउन सक्दछौ । यो बटनको आविस्कार सन् ५० को दशकमा भएको थियो।
जब बटनको आविस्कार भएको थियो तब घडीको गियरको साइकल १० मिनेटको थियो ।
नौ मिनेट नै किन ?
तर स्नुज बटनका लागि गियर जोडेका कारणबाट अन्य पुर्जाको तालमेल नबिग्रोस भन्नका लागि विशेषज्ञहरुले सल्लाह दिए कि स्नुज गियरको साइकल दशभन्दा बढी वा कम गरियोस्। अन्ततः निर्माताहरुले यसलाई ९ मिनेट बनाउने निर्णय गरे ।
यद्यपि यो स्पष्ट छैन कि विशेषज्ञहरुले ९ मिनेट समय राख्ने निर्णय किन गरे। केही विशेषज्ञहरुको तर्क छ कि १० मिनेटपछि तपाई गहिरो निद्रामा जानु हुन्छ, यस्तोमा यदि अलार्म पुनः बज्दा तपाई शायद उठ्न सक्नु हुन्न ।
यसको एउटा मनोवैज्ञनिक पाटो पनि बताउने गरिन्छ । भन्ने गरिन्छ कि जुन मानिसले अलार्म घडीको प्रयोग गर्दछ, उनीहरुलाई लाग्दछ कि यसलाई स्नुज गर्दा उनीहरु केहीबेर अरु सुत्नेछन् र समयको पावन्दी पनि टुट्ने छैन । अर्थात उनीहरु केहीमिनेटमा उठेर आफ्नो काममा निस्कन सक्नेछन्।
तपाई अलार्म बजेको केही समयपछि उठेर त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि बटन दबाउनु हुन्छ । अलार्म बनाउने इन्जिनियर्सका अनुसार निद्रामा मानिसलाई केही पलको अन्तर थाहा हुँदैन। त्यसैले उनीहरुलाई लाग्दछ कि उनीरु १० मिनेटका लागि अलार्मलाई अगाडि बनाइरहेका छन्, जबकि त्यो ९ मिनेटको हुन्छ ।
स्नुज बटनको उपयोगिता
डिजिटल घडीमा पनि अलार्मलाई १० मिनेटको साटो ९ मिनेट अगाडि बढाउन सजिलो थियो । किनभने गन्ती एकै संख्यामा गर्न सकिन्छ।
पछि जब स्मार्टफोन आयो तब स्नुज एप्लिकेशन बनाउने इन्जिनियर्सले यसको साइकललाई दश मिनेटमा राखे । यसलाई ९मिनेट राख्नुको कारण यो समयसीमा स्ट्यान्डर्ड बनिसकेको थियो, उनीहरु चाहन्थे त यसलाई परिवर्तन गर्न पनि सक्थे ।
अधिकांश मानिसमा अक्सर अलार्म बजेपछि पुनः सुत्ने बानी परिसकेको छ। तर जानकारहरुका अनुसार स्नुजको बटनले निद्रा खोल्ने काम गर्दछ । त्यसले अरु थप सुत्ने मौका दिँदैन, बरु मानिसलाई जगाउने काम गर्दछ ।
स्नुज बटन दबाएर हामी आफ्नो सुत्ने साइकललाई पुनः रिसेट गर्दछौ । यसबाट भ्रम त हुन्छ नै । साथै निद्रा नआउने समस्या पनि हुन्छ ।
जब हामी दोस्रो वा तेस्रो पटक अलार्मलाई अगाडि बढाउँछौ तब यसबाट निद्रा पूरा हुनुको साटो कयौपटक थकानजस्तो महशुस हुन्छ ।
त्यसैले विशेषज्ञहरुका अनुसार तपाईले त्यतिबेलाकै अलार्म राख्नु वेश हुनेछ जब तपाई साँच्चिकै उठ्न चाहनु हुन्छ । बीबीसी हिन्दी
Previous post: कुन अक्षरको व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ? थाहा पाउनुहोस्
Next post: दुनियाँको यस्तो पहिलो बच्चा, जसको लिङ्ग अहिलेसम्म थाहा छैन
तपाईलाई थाहा छ ? यसरी सुरु भएको थियो दाँत सफा गर्ने टुथब्रशको इतिहास
गुगलको एउटा असफल सामाजिक सञ्जाल यसरी भयो बन्द